ရေချိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ - သတင်း - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
1. ပိုက်လိုင်းမှ အပျက်အစီးများကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် faucet ကို တပ်ဆင်ပါ၊ တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း မာကျောသော အရာဝတ္ထုများနှင့် မထိမိစေရန်၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဘိလပ်မြေ၊ ကော်စသည်တို့ကို မထားခဲ့ပါနှင့်၊ မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံလွှာ၏ တောက်ပမှုကို မထိခိုက်စေရန်။
2. ရေချိုးသောအခါတွင် ရေချိုးခြင်းကို အလွန်အမင်း မပြောင်းပါနှင့်၊ ညင်သာစွာ လှည့်ပါ။
3. ရေချိုးခေါင်း၏လျှပ်စစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမျက်နှာပြင်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ရေချိုးခေါင်း၏ လျှပ်စီးကြောင်းမျက်နှာပြင်ကို ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်ဖြင့် သုတ်နိုင်ပြီး ရေချိုးခေါင်း၏ မျက်နှာပြင်ကို အသစ်အတိုင်းတောက်ပစေရန် ရေဖြင့်ဆေးချနိုင်သည်။
4. ရေချိုးခေါင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် 70°C ထက်မပိုသင့်ပါ။ တိုက်ရိုက်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် ရေချိုးခေါင်း၏အိုမင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ရေချိုးခေါင်း၏သက်တမ်းကို တိုစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် Yuba ကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ အပူရင်းမြစ်မှ ရေချိုးခေါင်းကို တတ်နိုင်သမျှ ဝေးဝေးတွင် တပ်ဆင်သင့်ပြီး Yuba အောက်တွင် တိုက်ရိုက်မတပ်ဆင်နိုင်ပါက အကွာအဝေးသည် 60CM အထက်ဖြစ်သင့်သည်။
နောက်တစ်ခု:Stainless Steel Rain Shower ပိုက်သည် universal ဖြစ်ပါသလား။ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ?